छबि-शिल्पा प्रहरी चौकीमा : रेखा थापाले गरिन फोन, शिल्पाको रुवाबासी ….(हेर्नुहोस भिडियो) « Onlinetvnepal.com
छबि-शिल्पा प्रहरी चौकीमा : रेखा थापाले गरिन फोन, शिल्पाको रुवाबासी ….(हेर्नुहोस भिडियो)
Published : 12 July, 2019 3:53 pm
“अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजुरी गरेपछि माहोल गर्माएको थियो ।” तर ंबिहिबार निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरले बिच महानगरीय प्रहरी परिसर ंटेकुमा सहमति भएको छ । शिल्पाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा पति छविराज ओझा विरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् । छवि र शिल्पाले विवाह भएको लुकाउँदै आएका थिए । ंएकाएक डिर्भाेंसको खबर आउँदा माहोल निकै तातेको थियो ।
यसबारे चलचित्र कर्मिको नाताले रेखा थापाले तपाईलाई के भन्नुभयो ? भन्ने प्रश्नमा छबिले यो घटना यता आउनु भन्दा अगाडि यस्तो हुँदै छ भनेर जानकारी गराएको बताए । पुर्वपत्नी तथा नायिका रेखा थापाको फोन आएको छ भन्ने प्रश्नमा ओझाले भने- ंहो उहाँले यस्तो हुँदैछ भनेर फोन गर्नुभएको थियो ।’ छविराज ओझाकी शिल्पा चौथो श्रीमती हुन् । उनले ओझाले निर्माण गरेको फिल्म ‘लज्जा’बाट ंचंलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन् । उनीहरु बीच आगामी दिनमा झगडा नगर्ने भन्दै लिखित सम्भौता भएको हो । तर, ओझाले डिर्भोस नदिने उल्लेख गरेका छन् ।
छबिले भने, यो साधारण घर झगडा हो, यसमा मिडियामा आएको जस्तो ठूलो कुरा होईन । सबैको घरमा यस्ता श्रीमान् श्रीमती बिच साधारण झगडा भैरहन्छन । यो कुनै ठुलो कुरा नभएको बताए । अब शिल्पा जि तपाई संगै बस्नु हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँ आउनुहुन्छ भने सधै स्वागत गरेको बताए । झगडा भैसकेपछी १५,१६ दिनसम्म फोन गर्नुभएनरे हो भन्ने प्रस्नमा भने उनले हो मैले फोन गरिन दाईको घरमा बसेको छ भन्ने थाहा भएपछी फोन गर्नुपर्ने आवस्यक नभएको बताए । उनले “चार आनाको मुर्गीलाई १२ आनाको मसला” भने जस्तै हो भन्दै बाहिरिए ।
घरझगडा भएपछि शिल्पा अहिले दाई बनाएकी विकाश रौनियारको घरमा बस्दै आएकी छिन् । ंटेकु निस्किएपछि पनि शिल्पा दाइ रौनियारकै गाडीमा बसेर गइन् । गाडीमा उनी रोइ रहेकी देखिन्थिन् । प्रतिक्रिया दिनुस भनेपछि शिल्पाले भनिन – ं”मलाई जे पर्यो मैले भोगे, कसैलाई दुख्दैन मलाई मात्र दुख्छ, यदि कसैलाई त्यस्तै पिर परेको छ त्यस्तै पिडा परेको छ भने कृपया आउन सक्नु हुन्छ । म आए भने तपाईहरु पनि नडराई आउनु ।” शिल्पाका अनुसार छबी राज ओझाले शिल्पासंग ंमाफी मागेका छन् । अब देखि त्यसो नगर्ने सहमति भएको बताएका छन । हेर्नुहोस बाकी यसै भिडियोमा :